Ugxeka ukuhlala uSotashe | News24
Ugxeka ukuhlala uSotashe
Xolani Sotashe ugxeka iinkokheli ngokwahluleka ukulawula itoyitoyi ethe yasuba umphefumlo ePhilippi. UMFANEKISO: unathi obose
Ukhwel’ ezehlela kwiinkokheli zokuhlala usihlalo wombutho wezopolitiko i-African National Congress (ANC) kwingingqi iDullah Omar, uXolani Sotashe, watsho ezigxeka ngokohluleka ukulawula iimingcelele yoqhankqalazo kwiingingqi ezihlala kuzo.
Oku ukuthethe ngethuba etyelele izihlobo zexhoba lengozi yemoto u-Andiswa Ndevu. U-Ndevu, nobe minyaka ingama 35, usutywe kukufa emva kokuba kutshayiswe isithuthi sakhe ngethuba loqhankqalazo lwabahlali bendawo iMarikana kwiveki ephelileyo. Waswelekela kwindawo yexhwayela.
Nangona zingaqinisekiswanga ezi ngxelo, kutyholwa ngelithi kusweleke abantu ababini ngethuba lalo mbhodamo, nalapho abahlali bebegunyazisa ukufakelwa iinkonzo.
Ephawula ngalo qulukubhode u-Sotashe uthe ayiyongxaki into yokuqhankqalaza xa ngaba abantu bekwenza oko ngokusemthethweni.
Ukanti uthe iye ibe yingxaki xa ngaba le migushuzo ichaphazela abanye abantu ngendlela egwenxa. “Kubalulekile ukuba iinkokheli zazi ukuba ukukhokela kuhambelana noxanduva. Njengenkokheli kuyafuneka ukuba sifundise abahlali ngendlela yokuqubulisana neengxaki zabo ekuhlaleni,” utshilo. “Ayiyongxaki uqhankqalaza, kodwa yingxaki xangaba kuzotshatyalaliswa izinto esele zikhona kunye nokubulawa kwabantu.”
Woleke ngelithi ukuba abahlali base Marikana babengazange bagibisele izithuthi ngamatye uNdevu ngesatya amazimba.
Wongeze ngelithi ubunkokheli bubonakala ngemihla ka xakeka nangendlela inkokheli ethi iwusingathe ngayo umceli mngeni.
Othethela usapho lakwaNdevu uAndile Mayishe, nokwa ngumzala kamfi, uthe uAndiswa usweleke ngoLwesibini weveki edlulileyo ngethuba esendleleni esuka ku sisi wakhe Ilitha Park.
“Ngexesha kusenzeka lengozi ebekhwele yedwa esithuthini. Le moto imtshayisileyo kuyabonakala ukuba ibihamba ngesantya esiphezulu. Imtshayise kwelicala lomkhweli yabotyoza imoto yonke yaminxisela ngaphakathi,” utshilo u-Mayishe.
Uthe belikhaya baxhelekile kwaye bonzakele. “Ngokwenkangeleko le moto imtshayise yamrhuqa into engange kilometers angamashumi amahlanu. Uthe imoto eyayiqhutywa nguNdevu yayiphele vuthu ingenakulungiseka,” uvale ngelitshoyo.